Kani waa koobkii uu abuuray Saville ee Abaalmarinta Pornhub | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadeeyaha caanka ah ee Peter Saville ayaa naqshadeeya koobab abaalmarinta Pornhub
Peter Saville wuxuu mas'uul ka ahaa naqshadeynta koobab loogu talagalay Abaalmarinta Pornhub. Haa, naqshadeeyahaas ayaa loo aqoonsaday inuu albumkiisa daboolayo muusikada Qaybta Joy iyo kuwa kale oo badan sida Peter Gabriel ama Eno.
Qaar ka mid ah koobab xiiso leh qaabkooda iyo naqshadeynta taas wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku xirno iyaga waxyaabaha ay ka kooban yihiin dadka waaweyn in laga helo websaydhka la yiraahdo pornhub ayaa laga sii daayaa malaayiin shaashad ah nooc kasta oo aalado ku baahsan meeraha.
Saville ma daryeelin oo keliya samee qaar ka mid ah daboolka ugu caansan kooxaha muusikada iyo heesaha, laakiin amaantiisa waxaa iska leh maaliyada rasmiga ah ee kooxda kubada cagta England ama xitaa astaanta cusub ee Burberry.
Naqshaddiisu waa qayb ka mid ah farshaxanka oo leh dhammaan isku xidhka dabiiciga iyo dareenka oo muujinaya heerka tayada ee uu had iyo jeer ku daabaco shaqooyinkiisa farshaxanka. Isagu kama maqna midabka ugu badan ee astaanta Pornhub waxaana ku dhiirrigeliya qaab dhismeedka kelli ee hormoonnada galmada iyo kiimikada kale ee ka dhex shaqeeya xiriirka aadanaha.
Caqabada ugu weyn ee abuurista koobkan, waa siduu hadalka u yidhi, waa in la abuuro farshaxan u dabaaldega galmada iyadoo aan lagu dhicin ereyada la xiriira adduunka ee eroticism iyo shineemo dadka waaweyn. Qaar ka mid ah abaalmarinnada ka dhici doona iyo booska 11-ka Oktoobar ee magaalada Los Angels iyo markan waxay yeelan doonaan abaalmarin uu abuuray naqshadeeye weyn.
Kaliya maalmahan ka hor ayaan ku baranay 100-ka degel ee ugu booqashada badan adduunka y iyaga waxaa ka mid ahaa in of Pornhub. Koobabyada hadda yeelan doona naqshadeeyaha weyn Saville ee safkooda si kuwa guuleysta ay koobka u dhigaan meesha ugu quruxda badan guryahooda. Surreal iyo war yaab leh shaki la’aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Naqshadeeyaha caanka ah ee Peter Saville ayaa naqshadeeya koobab abaalmarinta Pornhub
Koobkii adduunka ugu foosha xumaa!
Ku jawaab Juanstrong
Volkswagen waxay soo bandhigeysaa astaanteeda cusub